Somalia: Al-Shabaab oo hoobiyaal ku weeraray xarunta Villa Somalia - Wargane News
Home Somali News Somalia: Al-Shabaab oo hoobiyaal ku weeraray xarunta Villa Somalia
Somalia: Al-Shabaab oo hoobiyaal ku weeraray xarunta Villa Somalia
Ugu yaraan lix qof ayaa ku geeriyoodey 13 qof oo kalena waa ku dhaawacmeen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen masuuliyiin ka tirsan Caafimaadka.
Laba qof oo kamid ah dadka dhaawacmey ayaa ah caruur, dadka ku geeriyoodey waxaa kamid ah nin iyo laba caruur ah oo u dhalay iyo haweenay gurigiisa ka shaqeyneysey. Dhimashada waxaa warbaahinta u xaqiijiyey Afhayeenka Gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane.
Hoobiyaasha ayaa ku soo dhacay guryo aad ugu dhaw Madaxtooyada ee Villa Soomaaliya, waxaana wararka qaar sheegayaan in qaar kamid ah madaafiicdu kuba dhaceen xarunta Villa Somalia gudaheeda, dadka geeriyoodeyna uu ka mid yahay nin Boolis ah oo ka mid ahaa dareewalada xafiiska Raysalwasaaraha.
Weerarakan masuuliyadiisa waxaa sheegtey al-Shabaab.
Nin u hadley al-Shabaab oo magiciisa ku sheegay Abu-Muscab ayaa warbaahinta u sheegay in werarkaani qayb ka yahay hawlgalo ay ka wadaan Muqdisho.
Weerarkan ayaa dhacay xilli maalin ah, Saddexda masuul ee u sareeya Dowladda Soomaaliya ayaa kuligood dalka ka maqan yihiin.
Dowladdu kama hadlin weli weerarkan khasaaraha geystey